ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ...? ~ မြတ်မွန်
ဘဝရဲ့သင်္ခန်းစာလေးတခု အဖြစ် မှတ်ယူသွားတယ် ညီမလေးရေ..
11/03/2010 11:18 PM
ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာနေပါစေ အလုပ်ကတော့ လုပ်မှာပဲ။ ချမ်းသာချင်စိတ်ကတော့ ပြင်းပြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ စိတ်ဖိ ကိုယ်ဖိ လှူချင်လို့။ ဒါကြောင့်သာ ချမ်းသာ ချင်တာ ၊ ကိုယ့်အတွက် ဆိုရင်တော့ မလိုဘူး။ ရောက်ရာ နေရာမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။
11/04/2010 1:40 AM
ပိုက်ဆံချမ်းသားတိုင်းလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာ တကယ်ကို ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်..
ဘာလို့ဆို မေတ္တာကို ငွေနဲ့ ၀ယ်လို့ မရနိုင်သလို စေတနာတို့ အကြင်နာတို့ဆိုတာလည်း ငွေပေးလို့မှ မရတာနော်
ပြီးတော့ ငွေဆိုတာ လူရဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်။။
ဒါကြောင့်လည်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဝေးကွာကုန်ကြတယ်..
အစ်မလည်း ဘယ်တော့မှ ထီမထိုးဘူး
အလကားရမဲ့ ကံဇာတာ မပါဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လို့ ......... ဟီး ကံက ဒီလောက်ကောင်းတတ်တာ..
ပိုစ့်လေးက ကောင်းလိုက်တာ တွေးစရာလေးတွေ ပေးသွားတယ်..
11/04/2010 4:53 AM
11/04/2010 5:51 AM
11/04/2010 5:59 AM
စဉ်းစား စရာတွေပေါ့နော် ပိုက်ပိုက် တွေ အဲလိုရှိလာရင် ဘယ်လို အသုံးချမလည်း ဆိုတဲ့ အပေါ် မှာ လည်း စိတ်ချမ်းသာမှု့ က မူတည်မယ် ထင်ပါတယ် အမ တော့ ထီတခါလောက် ပေါက်ချင်တယ် ကမ္ဘာပတ်ချင်လို့
11/04/2010 10:28 AM
11/04/2010 11:33 AM
ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပိုက်ဆံပေါ့ဗျာ.. ဘယ်လိုများဆက်စပ်နေလဲဆိုတာ.. ခဏခဏတွေးဖြစ်တယ်..
အဲဒီမှာက ဘာတွေ့လာရလဲဆိုရင်.. လူဟာ ၀င်ငွေများလာတာနဲ့အမျှ ကိုလုပ်ချင်တာ လုပ်လာနိုင်တယ်.. ၀ယ်ချင်တာကို ၀ယ်နိုင်လာတယ်.. ဒီတော့ လူတွေက ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေများမှ ပျော်ရွှင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး ပိုက်ဆံရှာကို ဖိရှာကြတယ်.. အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ပါပဲ..
ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံတွေ များလာရင်ရော ပျော်ရွှင်သွားသလားလာမေးရင်တော့ မပျော်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲ..
ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်လေးတစ်ခုပြောချင်တယ်အမ.. ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူး.. စာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖတ်ဖူးတာပါ.. ပိုက်ဆံရှာရာမှာ အမှတ်တစ်ခုရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်.. ဥပမာဗျာ.. ၀င်ငွေကို x လို့ထားပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို y လို့ထားပြီး.. ကျွန်တော်တို့ ဂရပ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့..
၀င်ငွေ x.. များလာတာနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု y ဟာ တိုးလာလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာ ကိုယ့်အပျော်ဆုံးနေရာကို အမှတ်aလို့ အမှတ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့..
နောက်ပိုင်း ၀င်ငွေ x တိုးလာတော့ရော.. ပျော်ရွှင်မှု y နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျသေးလား ဆိုတာကို ခုနက အမှတ်aကပြလိမ့်မယ်..
ကြာလာတော့ ၀င်ငွေ x တိုးလာပေမဲ့ y က တက်မလာပဲ.. ကျသွားတာတောင်ရှိတတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့်လည်း တိမ်ညွှန့်စားပြီးလရထားစီးနေတဲ့ သူတွေရဲ့ ရွှေပန်းကန်ပေါ်ကျတဲ့ မျက်ရည်တို့ ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ထင်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ အမှတ်aကိုရှာကြပါစို့..
ပျော်ရွှင်ခြင်းအကြောင်းမကြာခဏတွေးမိလို့ ကော့်မန့် ရှည်သွားပါတယ် အမရယ်..
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရသပေးလေး မွန်ရေ
11/04/2010 12:00 PM
ဘ၀ အတွက် မှတ်ယူစရာသင်ခန်းစာပဲပေါ့။
11/04/2010 12:35 PM
ကိုယ့်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရှိစေတဲ့ ၀ါသနာတစ်ခုခုလည်း......လူတိုင်းမှာ လိုအပ်မယ်ထင်သေးတယ်နော့်ဗျ.......။
11/04/2010 2:36 PM
ပိုက်ဆံဆိုတာ ရှိတိုင်းလည်း ပျော်ရွှင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်မှသာ လူကိုစိတ်ချမ်းသာမှုရစေနိုင်မယ့်အရာလို့မြင်မိတယ်။
ဂျင်းလည်း ပိုက်ဆံတွေအများကြီးမချမ်းသာချင်ဘူး။ သာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀မျိုးလေးကိုပဲ လိုချင်တယ်။
11/04/2010 3:17 PM
အစ်မရေ ဒီပိုစ့်လေးက တကယ်သင်ခန်းစာရစေပါတယ် ချဲထိုး၊ လောင်းကစားလုပ်၊ နှစ်လုံးထီ၊ ထီ တွေ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ အစ်မတို့ ညီမလေးတို့ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေ ပိုပြီးဖတ်သင့်တယ်နော်
မွန်ရေ...အသုံးကျမှုနဲ့ အသုံးချတတ်မှု ကိုခွဲခြား သိသင့်တယ်ပေါ့နော်။ အသုံးမကျမှုတွေနဲ့အတူ အသုံးချနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ သုံးမရတဲ့သူပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ Post လေးပါပဲ မွန်ရေ.... :)
တကယ်သာ စိတ်ချမ်းသာမယ် ဆိုရင် ဘာမှ မလိုပါဘူး။
ပြီးတော့ ရုတ်တရက်ချမ်းသာလာတဲ့ ငွေကို သုံးတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီငွေနဲ့ စိတ်ချမ်းသာခြင်းကို သေသေချာချာ ဖန်တီးယူရင်တော့ တော်တော်များများ ရနိင်မယ်ထင်တယ်။
ဆင်းရဲရဲ ချမ်းသာသာ ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ်တွေ မရှိတော့တဲ့နေ့ဟာ စိတ်မချမ်းသာရတော့တဲ့ နေ့တွေပဲ ဖြစ်မယ်။
11/05/2010 1:49 AM
အဓိကတော့ လူတစ်ယေက်ရဲ့စိတ်ရယ်သူ့ ရဲ့ခံယူချက်တွေ နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်နော်
ပိုက်ဆံ မရှိရင်လည်း စိတ်မချမ်းသာဘူး၊
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကို
ငွေနဲ့ ဖန်းဆင်းလို့ ရတယ်၊ ငွေရှိရင်အရာရာ
ပြည့် စုံမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆ ဟာ ဘယ်တော့ မှ
ဟုတ်ပါတယ် မွန်ရေ ...
ငွေရဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်နေရတာပဲလေ ...
ကိုယ့်နဖူးကချွေး ခြေမကျသည်အထိ လုပ်ပြီးမှ ရတဲ့ငွေက ပိုတန်ဖိုးရှိတာပေါ့ ...
11/07/2010 11:04 PM
ကျွန်တော်တော့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတုန်း
မြတ်မွန်မှာ ရက်လွန်ခဲ့ကြတာတဲ့ ပါးပါး ပြောတာကို သတိရနေတယ်
အယ် ပို့စ်နဲ့လဲမဆိုင်ပြန်ဘူး လုပ်ပြန်ဘီ ဒီဝက်က
ထီတော့ ပေါက်ချင်သားရယ် ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့မထုိးဖြစ်ဘူးရယ် ဟဟဟဟဟ
ပိုက်ဆံက အရာရာကို ဝယ်ယူလို့မရပါဘူး သမီးကတော့ လိုချင်တဲ့အချိန်ရှိရင် တော်ဘီ
11/10/2010 1:48 AM
ကိုဆိုဆီ ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ပိုက်ဆံမရှိရင်လည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ အများသား။ ကျွန်တော်ကတော့ ပိုက်ဆံ ရှိတာ စိတ်ညစ်စရာလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖူးဘူး။ ပညာရှိရင် ပိုက်ဆံဆိုတာ စီမံခန့်ခွဲလို့ ရပါတယ်။
မိုးလင်းက မိုးချုပ် အလုပ်တစ်ခုထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ရင်း လူ့သက်တမ်းကို ဖြုန်းပစ်ရမှာ နှမြောစရာ အကောင်းသားဗျာ။ တစ်ခြား လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အနည်းဆုံး အေးအေးဆေးဆေး စာရေးလို့ ရတာပေါ့။
ဟိုတစ်နေ့က အိုင်ယာလန်က အဖိုးနဲ့ အဖွားကတော့ ထီပေါက်တဲ့ ပိုက်ဆံ အကုန် လှူပစ်တယ်တဲ့။ အဲဒီလို လူတွေလည်း ရှိတာပဲ။
11/10/2010 5:03 PM
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာ ...
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့ ငွေနှင့် များများ မဆိုင်တော့ပါ ။
ပျော်ရွှင်မှု အတုများကို ၀ယ်နိုင်နေသဖြင့် အတုအစစ် မခွဲနိုင်သောအခါ ငွေနောက်သို့ ပါတတ်တာ ...
11/14/2010 8:09 PM
"Hi, I cannot fully grasp the best way to add your website in my rss reader. Are you able to Help me, please"
ကျွန်မလည်း "လူတစ်ယောက်မှာ အလုပ်လေးတစ်ခုရှိနေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုလေး ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ။ ကိုယ်လုပ်ချင်နေတာတွေ လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝမှာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ငွေတွေ အများကြီးရှိပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာကို စိုးရိမ် ပူပန်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး ။ ပိုက်ဆံရှိတိုင်းလဲ စိတ်ချမ်းသာမှုမရသလို စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာလဲ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှိနေမှ မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ ချမ်းသာခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာ လူတွေရဲ့ တောင့်တမှုနဲ့ သူတို့ရရှိလာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု အချိုးအစားကို တိုင်းရတာ မဟုတ်လား။ "
အဲဒါကို လက်ခံတယ် ပိုက်ဆံအများကြီးမလိုချင်ပါဘူး ဘ၀မှာ အချိန်တွေကို အေးဆေးပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်ကျော်ချင်ပါတယ်..
11/24/2010 1:19 PM